Isboonsar - Isle'eg Isleeg Isu-dheellitirka Kiimikada: NZ Qandaraaslayaasha IT
Isboonsar - Qandaraaslayaal IT
Dhamaan taageerayaasheena mahadsanidiin
Damaanad qaadeyaasha isu dheelitirka kiimikada
Si loo ilaaliyo adeeg noocan oo kale ah ee adeegsadayaashayada. Runtii waan qadarinaynaa kafaala-qaadayaasheena kuwa inta badan wax ku biiriya sii waditaankeena
Kafaala: Qandaraaslayaal IT ah
Website: Qandaraaslayaasha IT
Waad ku mahadsan tahay inaad tahay taageeraheena
In kasta oo nolosheena shaqsiyadeed ay ku noqdeen wax la mid ah heerarkii pre-COVID-19 ee halkan New Zealand, dhaqaale ahaan, wadada dib u soo kabashada ayaa ballanqaadaysa inay tahay tartan xiiso leh. Urur kastaa wuxuu la falgalaa oo u qorsheeyaa xaalada qaab u gaar ah duruufahooda, laakiin su'aasha ah sida dhibaatadu u saameyn doonto qorista waa mid ku soo socota guud ahaan guddiga.
Su'aasha 'Miyaan shaqaaleeyaa shaqaale joogto ah ama qandaraasle?' maahan wax ku cusub loo shaqeeyayaasha, laakiin marka la eego go'aan qaadashada cadaadiska leh ee loo qoondeeyo kheyraadka saxda ah waqtiga saxda ah waxay qaadaneysaa muhiimad sare, sameynta xulashada saxda ah ayaa noqotay mid aad u muhiim ah. Halkan waxaa ah hageheena lagu qiimeynayo wanaagga iyo xumaanta shaqaaleynta shaqaalaha joogtada ah iyo qandaraasleyda.